अहिलेका राजनैतिक दलहरु दलालमा रुपान्तरण भैसके, अब परिवर्तन आवश्यक छ: शुक्रबहादुर गुरुङ - PLA Khabar
अहिलेका राजनैतिक दलहरु दलालमा रुपान्तरण भैसके, अब परिवर्तन आवश्यक छ: शुक्रबहादुर गुरुङ
2020-09-15 2020-09-18 Tulasi Nepal
काठमाण्डौ – राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका अध्यक्ष शुक्रबहादुर गुरुङले अहिलेको राजनीतिको मुलधारमा रहेका राजनैतिक दलहरु माफिया वा दलाल मात्रै सिमित भैसकेको तर्क गर्दै अहिलेका राजनीतिक दलहरुको विकल्प वा त्यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका अध्यक्ष शुक्रबहादुर गुरुङसँग पिएलए खबरका लागि तुलसी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं ।
राष्ट्रिय नागरिक पार्टी कस्तो पार्टी हो ?
राष्ट्रिय नागरिक पार्टी भनेको देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने तथा अहिलेका राजनैतिक माफिया र दलाललाई राजनीतिको मुलधारबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले नै विस्थापित गर्ने वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति हो ।
अहिले राजनीतिको मुलधारमा रहेका सत्ताधारी कम्युनिष्ट वा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुबै चरीत्रका हिसाबले एउटै दल बने त्यसको विकल्पमा जनताको पहेरेदारी गर्न जनताको वास्तविक राजनैतिक पार्टी हो ।
कोभिड-१९ कै कारणले सिर्जित समस्याका कारण नागरिक पीडित छन्, यस्तोमा राष्ट्रिय नागरिक पार्टी कहाँ छ ?
अहिले पनि हामी जनताकै बिचमा छौं । हाम्रो तर्फबाट सकेको सहायता गरेका छौं । हामी कर्ममा विश्वास गर्छौं प्रचार गर्दैनौं त्यसले पनि राष्ट्रिय नागरिक पार्टीलाई तपाईंले नदेख्नुभएको हुनसक्छ ।
अर्कोतिर हामी आन्तरिक सांगठनिक सुदृढीकरणमा छौं । जहाँसम्म कोभिड-१९ का कारण देशका हरेक नागरिक पीडित छन् । यसबाट बाहिर निकाल्ने काम सरकारको हो । कोभिडका कारण समस्यमा परेका नागरिकलाई राहत, उद्दार र उत्थान गर्ने दायित्व सरकारको हो, सरकार त्यहाँ चुकेको कारणले नागरिक समस्यामा परेका छन् । राष्ट्रिय नागरिक पार्टी पीडित नागरिक सँगै आफ्ना समस्याको समाधान राज्यले गर्नुपर्छ भनेर नागरिक सँगै उभिएको छ ।
यो त एउटा राजनीतिक नारा भयो, लकडाउन वा निषेधाज्ञाका कारण सिर्जित समस्याको समाधान के हो तपाईंको पार्टीको नजरमा ?
कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइमा लकडाउन वा निषेधाज्ञा अन्तिम विकल्प जस्तो गरि प्रस्तुत गरियो त्यो अबैज्ञानिक छ । अर्कोतिर लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाले सामन्य नागरिक रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था छ । राज्य यहाँनेर चुक्यो भन्ने निष्कर्ष हो ।
पहिलो कुरा भौतिक दुरी कायम राखेर सम्पूर्ण पेशा, व्यवसायलाई खुल्ला गरिनुपर्छ । चैत १२ देखि आजसम्म सार्वजनिक यातायात, पर्यटन, शिक्षा जस्ता क्षेत्र ठप्प छन् यिनिहरुलाई विषेश राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अब लकडाउन वा निषेधाज्ञा केही भएपनि कम भएको छ सहज हुने आशा गरौं नागरिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समयमा सरकार भ्रष्टाचार व्यस्त हुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । अर्कोतिर लकडाउन वा निषेधाज्ञाका कारण रोजगार गुमाएका र जीविकोपार्जन गर्न समस्या भएका नागरिकलाई तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्नेमा राज्यले गलत समय र गलत व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्‍यो । जसले राहत पाउनुपर्ने हो त्यसले कहिल्यै राहत पाएन, हाम्रो मुल समस्या नै यहीनेर हो ।
कोभिड-१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन के गर्नुपर्ला ? धेरै नेपाली विदेशमा अलपत्र अवस्थामा छन् नि ।
हो, पक्कै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका नेपाली नागरिक अहिले आफ्नो जन्मभूमि फर्किने आशामा आज साउदी र मध्यपूर्वका कैयौं देशमा अलपत्र परेका छन् । उनिहरुलाई राज्यविहिनताको अवस्था आउन दिनु उचित होइन । राज्य छ भन्ने अनुभूति विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकले गर्नुपर्‍यो । उनिहरु हाम्रा नागरिक हुन्, उनिहरुलाई सहजै आफ्नो जन्मभूमी फर्काउन नसक्नु राज्यको लाचार र गैरजिम्मेवार कार्य हो । यसलाई अविलम्ब सच्याउन राष्ट्रिय नागरिक पार्टी सरकारसँग माग गर्दछ ।
देशको अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा छ, यसलाई ट्याकमा ल्याउने तपाईंहरुको पार्टीको अवधारणा के हो ?
हो अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । हाम्रो जस्तो देशमा यसको स्वभाविक असर पर्न जान्छ ।
खासगरी राज्यले शिक्षा र स्वास्थलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने हो भने मात्रै ५० प्रतिशत समाधान हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थको व्यापारीकरणलाई मात्रै अन्त्य गर्ने हो भनेपनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ । अहिले नागरिकको सबैभन्दा ठूलो खर्च नै शिक्षा र स्वास्थमा भएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थको व्यापारीकरण अन्त्य गर्ने बित्तिकै आम नागरिकले लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ । त्यसले बिस्तारै आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थाल्छन् । यो नै देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सजिलो रणनीति हो ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अर्को रणनीति भनेको सरकारले बजेट समयमा खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्‍यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो पूर्वसर्त हो ।
खासगरी अहिलेको राजनैतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक छ । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष दलहरु माफियातन्त्र र लूटमा रमाएका छन् । अब यो बदल्ने आवश्यक छ । त्यसको लागि सबै नागरिकलाई हातेमालो गरौं र राजनीतिको नाममा भएको लूटलाई अन्त्य गरौं भन्न चाहान्छु ।
Posted in अन्तर्वार्ता, राजनीतिTagged शुक्रबहादुर गुरुङ
1 thought on “अहिलेका राजनैतिक दलहरु दलालमा रुपान्तरण भैसके, अब परिवर्तन आवश्यक छ: शुक्रबहादुर गुरुङ”
जितेन्द्र मर्दनिया 2020-09-16
उहाँ ले भनेको कुरा एकदमै सहि हो यहिलेको सरकार ले भष्टचार बाहेक अरु केही गरेको छैन ।
जनता रुवाउने काम मात्र गरेको छ ।